Copy cat | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Copy cat | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Copy cat na-na-online oghere egwuregwu dabeere na isiokwu nke yi Pita nwamba na ị nwere ike igwu na Fruity Ohere mepere Site. Nke a na egwuregwu mejupụtara iri-na-ise paylines na ise na-esi anwụde dị iche iche na-emeri ụzọ. The oghere atọrọ a echiche nke a obodo obi ma na ụlọ gburugburu na ndabere. Na a isiokwu nke mma katuunu style Jazz music, ị na-n'aka na-enwe egwuregwu a nile. n'ozuzu, egwuregwu awade katuunu isiokwu na-akpa ọchị na-achọ nwamba na-ị ọbịa. Ịkụ nzọ amalite na £ 0.01 ma na gị na kechioma ụbọchị, i nwere ike na-agbalị ya max ịgba nke £ 250 a atụ ogho.
Banyere Mmepụta nke Copy Cat
Nke a magburu onwe Pita nwamba themed egwuregwu na ị nwere ike igwu na Fruity Ohere mepere Site e mepụtara site NetEnt. Na narị-ewu ewu oghere egwuregwu kemgbe ikpeazụ iri afọ abụọ na-egwuri gburugburu ụwa, ha nanị na-adịghị mkpa ọ bụla iwebata.
The egwuregwu atụmatụ ụfọdụ ndị ọgaranya na ndị yi ndịna na akara nke yi nwamba. E nwere na-akpa ọchị red nwamba, iwe-acha anụnụ anụnụ nwamba na cute pink nwamba tinyere akara nke a karama nke mmiri ara ehi, a toy òké na a azụ ọkpụkpụ. The red cat bụ ihe nnọchianya gị mkpa anya n'ihi na iji merie max payout of 200 ugboro nzọ gị. The ala na mkpụrụ ego uru na akara nke egwuregwu a ị nwere ike igwu na Fruity Ohere mepere Site bụ ubọk Mbipụta. E nwere otu di na nwunye pụrụ iche akara na-enyere gị aka Ị kpọghee ekwt bonus feature nke egwuregwu. Ha bụ cat si ataṅu na ihe nnọchianya nke a ọlaedo cat akpụ.
Wild daashi: The ọlaedo cat akara bụ anụ mma na-ekpuchi niile akara ma e wezụga ikposa mgbịrịgba. Wild nwere ike iyi ka stacked ke akpa ukwu na mgbe ọ na-eme, niile cat akara na-esi anwụde 2 ka 5 ibu wilds kwa. N'ihi ya, i nwere ike imeri nnukwu ụgwọ ọrụ mgbe a na-eme. Ọbụna mgbe ọ bụla nke atọ cat akara iyi stacked ke akpa ukwu, ndị ọzọ nwamba nke otu na agba na-aghọ ọhịa na nke a na-enye ezigbo ego nke ụgwọ ọrụ kwa.
Gbasaanụ daashi: Mgbe ị na-egwu egwuregwu a na Fruity Ohere mepere Site i nwere ike ịkpalite ikposa feature na atọ mgbịrịgba akara ọdịda. Ị na-ahụ ọdịda iri free spins na ndị a spins nwere ike re-triggered n'oge ọ bụla.
Summary: Nke a bụ nnọọ ihe pụrụ iche na-akpa ọchị egwuregwu ị nwere ike igwu na Fruity Ohere mepere Site. Na a dịgasị iche iche nke bonuses na ikike iji tọghata niile isi akara n'ime ọhịa, ị nwere ike mfe na-atụ anya iji merie nnukwu ụgwọ ọrụ ole na ole kechioma spins ebe a.